ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပရိုဂရမ်များ - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> Software များ
Software အကြောင်းပြောကြရအောင်။ အမှုအရာလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနှင့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံ။ Windows၊ Linux ပေါ်တွင်ပြနာ။ Gimp သင်ခန်းစာများနှင့် virtual machine စသည့်အခြားကိရိယာများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့တိုင်း operating systems နှင့် programs များကိုအသုံးပြုသည်။ ပြproblemsနာများသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုမသိသောကြောင့်များသောအားဖြင့်အရာရာကိုမှန်ကန်စွာမလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သင်၏အလုပ်တွင်ကွန်ပျူတာကိုသေချာအသုံးပြုပါ၊ သင့်လျော်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသင်ရရှိပါသလား။ သငျသညျ optimized ဖြစ်စဉ်များရှိပါသလားသို့မဟုတ်သင်အများကြီးပိုပြီးအလိုအလျောက်နိုင်သလဲ သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ကိရိယာတွေရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောင်းလဲမှုအချို့ဒါမှမဟုတ်သင်စီမံခန့်ခွဲပုံနည်းလမ်းတွေရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော IP ကို ​​သိရှိခြင်း သို့မဟုတ် သိရှိခြင်းအကြောင်းအရာသည် ထပ်တလဲလဲဖြစ်နေသည်။ Linux စက်ပစ္စည်းတွင် ၎င်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။
ဤဆောင်းပါးတွင် ကွန်ဆိုးလ်ဖြင့် ဘရောက်ဆာတွင် အများသူငှာ IP ကို ​​စစ်ဆေးနည်း၊ ၎င်းကို ရယူနည်းနှင့် BASH ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ .sh script များတွင် သိမ်းဆည်းနည်းကို သင်ကြားပေးပါမည်။
၎င်းအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိက IP နှင့် နှစ်ခုကြားခြားနားချက်ကို မည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။
Scratch သည် MIT မှ ဖန်တီးထားသော ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး block-based visual interface ကို အခြေခံထားသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ကလေးများနှင့် အသိပညာမရှိသူများ၏ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းကို များစွာလွယ်ကူချောမွေ့စေပါသည်။ အသက် ၈ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်ကြားအတွက် အကြံပြုထားသည်။
ဒါကို အားလုံးက ပံ့ပိုးပေးတယ်။ ခြစ်ရာဖောင်ဒေးရှင်းမှရည်ရွယ်ချက်မှာ အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်-
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကလေးများအားလုံး၊ နောက်ခံအားလုံးမှ၊ စိတ်ကူးပုံဖော်ရန်၊ ဖန်တီးရန်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အရေးများကို ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် မနက်ဖြန်ကမ္ဘာကြီးကို ပုံဖော်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ Scratch နဲ့ ဘာလုပ်လို့ရလဲ။
အ .py တိုးချဲ့မှုပါရှိသော ဖိုင်များတွင် Python ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကုဒ် ပါရှိသည်။. ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် ကုဒ်၏ အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်သော ဖိုင်ကို execute လုပ်သောအခါ၊
တစ်ဦးနှင့်မတူဘဲ .sh ဖိုင် မည်သည့် Linux စနစ်မဆို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ညွှန်ကြားချက်များကို လုပ်ဆောင်သည့် .py ဖိုင်တစ်ခု အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် Python ကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Python နဲ့ ပရိုဂရမ်ကို စတင်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် ဒါပထမဆုံးလုပ်ရမယ့် အရာပါ။
ဒါက ကျွန်တော် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ နည်းလမ်းပါ။ ဘလော့ပုံများတွင် ရေစာ သို့မဟုတ် ရေစာများ ထည့်ပါ။. ကျွန်ုပ်တွင် ဆောင်းပါးများအတွက် ဓာတ်ပုံအလုံအလောက်ရှိပြီး ဤ bash script ဖြင့် ၂ သို့မဟုတ် ၃ စက္ကန့်အတွင်း ရေစာထည့်ပါသည်။
ဟိုးအရင်တုန်းက ကျွန်တော်သုံးတယ်။ အလုံးအရင်းတည်းဖြတ်မှုအတွက် GIMP. ဤရွေးချယ်မှု ဘလော့မှာတွေ့တယ်။ တရားဝင်နေသေးပေမယ့် ဒါက ငါ့အတွက် ပိုမြန်ပုံရပြီး အခုငါသုံးနေတဲ့အရာက ငါပြောသလိုပဲ။
ဤနည်းလမ်းသည် စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ၎င်းတို့ကို စီမံဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဖောက်သည်များထံ အမှတ်အသားပြုထားသော ဓာတ်ပုံဆရာများထံ ပေးပို့ရန် သင့်တော်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် Ubuntu သုံးနေတဲ့ Linux အသုံးပြုသူတွေအတွက် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပါ။ ယခု ကျွန်ုပ်သည် သင့်အား ဇာတ်ညွှန်းနှင့် အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြချက်ကို ချန်ထားခဲ့၍ ၎င်းကို အသုံးပြုရုံသာမက ၎င်းကို သိရှိနားလည်ပြီး BASH ကို စတင်လေ့လာနိုင်စေရန်အတွက် ချန်ထားခဲ့သည်။ ၈ လိုင်းပဲရှိတယ်။
ငါကဲ့သို့သောကိရိယာတခုရှာဖွေနေပါတယ် ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်သိုလှောင်ထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောနည်းဖြင့်စုစည်းစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုပေးသော Zotero၊ ငါလုပ်ချင်သောစီမံကိန်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ငါရေးတော့မည့်ဆောင်းပါးများပေါ်တွင်။
ထို့အပြင် Zotero ကိုလူအများသိထားသည့်မှတ်တမ်းများဆိုင်ရာမန်နေဂျာအဖြစ်သိကြပြီး ၄ င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းယနေ့သူတို့ကိုယ်တိုင်စီမံကိန်းအား ကိုယ်ပိုင်သုတေသနလက်ထောက်။ ဒါကကျွန်တော်မြင်ဖူးသမျှထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Maker တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၊ သို့မဟုတ်ပရောဂျက်များတွင်အလုပ်လုပ်လိုလျှင်၊ မတူညီသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်လျှင်သင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပါလိမ့်မည်။